SMART - Yoma Bank
ရိုးမဘဏ်ရဲ့ SMART ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ဘဏ်ကိုသွားစရာမလိုတော့ဘဲ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို သင့်စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ SMART ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ MPU Debit Card ကို အခမဲ့ ရယူအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
SMART အကောင့် လျှောက်ထားရန်
SMART Account ၏ ထူးခြားချက်များ
SMART အကောင့်အချင်းချင်း အခမဲ့ငွေလွှဲခြင်း
အခမဲ့ SMART MPU Debit Card
SMART Credit အွန်လိုင်းချေးငွေ
MPU Logo ပါ ATM စက်တိုင်းတွင် ၁လလျှင် ငွေကျပ် ဆယ်သိန်းအထိ ဝန်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုဘဲ ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
Wave Money အကောင့်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း
SMART MPU Debit Card ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း
ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းများအတွက် MPT & Telenor 3% ၊ Ooredoo 3.5%
အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်သော Yoma Bank Mobile Banking Apps
အကောင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ မပေးရခြင်း
ပိုမိုကြည့်ရှုရန် ( ၁၀ )
ယခုပဲ Mobile Banking App ကို Download ရယူလိုက်ပါ
သင့် SMART Account ကို Yoma Bank Mobile Banking App တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
Mobile Banking အသုံးပြုပုံကို လေ့လာရန် ဗီဒီယိုများ
Mobile Banking Activation ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Log In ဝင်ခြင်း
Mobile Banking အသုံးပြု၍ ရိုးမဘဏ် အကောင့်အချင်းချင်း ငွေပေးပို့ခြင်း
Mobile Banking အသုံးပြု၍ မိမိကိုယ်ပိုင်အကောင့်အချင်းချင်း ငွေပေးပို့ခြင်း
Mobile Banking အသုံးပြု၍ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း
မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများ
​မေး ။ ။ အခြား ATM စက်တွေမှာ SMART ကို ၀န်ဆောင်ခ အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
​ဖြေ ။ ။
ဟုတ်ကဲ့။ တချို့ ATM စက်တွေမှာ ၀န်ဆောင်ခ ကောက်ခံမယ်လို့ ဖော်ပြထားသလို ပြေစာမှာလည်း ၀န်ဆောင်ခ ကောက်ခံထားတယ် ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မပူပါနဲ့။ MPU အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ATM စက်တိုင်းမှာ SMART Card ကို တစ်လလျှင် ငွေကျပ် ဆယ်သိန်းအထိ ဝန်ဆောင်ခ ပေးရန်မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ SMART ကတ်သုံးပြီး ငွေထုတ်တဲ့ Customer တွေ ကိုယ်စား Yoma Bank က ၀န်ဆောင်ခကို ကျခံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
​မေး ။ ။ Super Market တွေနဲ့ POS အရောင်းဆိုင်တွေမှာ SMART MPU Debit Card နဲ့ ငွေပေးချေလို့ ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ MPU Debit Card လက်ခံတဲ့ ဘယ်ဆိုင်မှာမဆို SMART MPU Debit ကတ်နဲ့ ငွေပေးချေလို့ ရပါတယ်။ SMART ကတ် သုံးပြီး ငွေပေးချေမှုအတွက် ၀န်ဆောင်ခ ပေးစရာ မလိုပါဘူး။
​မေး ။ ။ Wave Money အသုံးပြုဖို့ တယ်လီနော ဖုန်းကတ်ရှိဖို့လိုပါသလား။
Wave Money က တစ်ဆင့် ငွေအသွင်းအထုတ် ပြုလုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Wave Account ဖွင့်ထားတဲ့ တယ်လီနော ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု လိုအပ်ပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်မှာ တယ်လီနော ဖုန်းနံပါတ် မရှိပေမဲ့ ရိုးမဘဏ်ရဲ့ SMART နဲ့ Wave Money ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Wave ကိုတော့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုတွေဆီကို ငွေပေးပို့ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
​မေး ။ ။ ငွေပေးချေမှုနဲ့ ငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေအားလုံးကို အချိန်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ SMART ကို သုံးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Account တွေအချင်းချင်း၊ တခြားသူတွေရဲ့ SMART နဲ့ ရိုးမဘဏ် Account တွေ၊ ကိုယ့် Wave Money Account နဲ့ တခြားမိတ်ဆွေ၊ မိသားစုတွေရဲ့ Wave Money Account တွေဆီ ၂၄ နာရီ နေရာမရွေး ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
သင်နှင့် အနီးဆုံး ရိုးမဘဏ် ဘဏ်ခွဲကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
အနီးဆုံး ရိုးမဘဏ် ဘဏ်ခွဲများကို ရှာရန်
© 2022 Copyright Yoma Bank. No.192, Level 8, Office Tower 2, HAGL Myanmar Center Tower, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar. All rights reserved.
SMART Credit နှင့် SMART Credit Business ဆိုသည်မှာ ရိုးမဘဏ်၏ Customer များအတွက် ဘဏ်ကိုသွားစရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်သော အပေါင်ပစ္စည်းမလိုသည့် အွန်လိုင်းချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
SMART Credit သည် ရိုးမဘဏ်၏ SMART Account ရှိသူတိုင်း အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူ လျှောက်ထားရယူနိုင်သည့် တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။
SMART Credit အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်
SMART Credit Business သည် ရိုးမဘဏ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အထူးပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းသုံးချေးငွေဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။ SMART Credit Business ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူလျှောက်ထားနိုင်ပြီး အပေါင်ပစ္စည်းပေးစရာ မလိုပါ။
SMART Credit Business အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်
SMART Credit နဲ့ SMART Credit Business ကိုလျှောက်ထားရန် SMART Account ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
SMART အကောင့် လျှောက်ရန်